Itoobiya Oo Dareen Murugo Ugu Dabaal Degaysa Dhimashada Fidel Castro Iyo Soomaalida Oo Dib U Xasuustay Sidii Uu Uga Hiiliyay Itoobiya Iyo Mahadhooyinkii Madoobaa Ee Uu U Horseeday Hogaamiyii Hore Ee Cuba | Berberatoday.com
Itoobiya Oo Dareen Murugo Ugu Dabaal Degaysa Dhimashada Fidel Castro Iyo Soomaalida Oo Dib U Xasuustay Sidii Uu Uga Hiiliyay Itoobiya Iyo Mahadhooyinkii Madoobaa Ee Uu U Horseeday Hogaamiyii Hore Ee Cuba
Hargeysa(Berberatoday. com)-Guulaha ugu waaweyn ee militariga Fidel Castro-hogaamin jiray ee dalka Cuba ayaa waxa ku kala qaybsan fikradaha u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaalida ka dib markii Castro oo 90 jir ahaa ku dhintay Havana.
Bishii February 1977, Castro ayaa ogolaaday in la geeyo 1000 askari oo hoos imaanaya hoggaanka Jeneral Arnaldo Ochoa si ay u caawiyaan Itoobiya dagaalka ka dhanka ah dalka dariska ee Soomaaliya.
Ciidamada ayaa u baxay si ay u taageeraan xukuumaddii Mengistu Haile Mariam si uu u qabsado gobolka ay xooga ku haystaan ee Ogaden. Haile Mariam, oo ahaa madaxii afgambiga milatariga ee shuuciga, ayaa markii dambe la tusay isagoo sawir ka muuqda caan ah oo kula jira Castro ka dib markii ciidamada Cuba si guul leh uga adkaadeen ciidamadii quwada qaranka Soomaaliya.
Soomaaliya oo waqtiga gacan sareeysay , inkastoo Sokeeyaha Ethioipia rumeysnaayeen inay ku guuleysteen dagaalka ayaa markii danbe dhulka Ogaden waxa Itoobiyau gacan gashay 17,000 askari ee ciidamada Cuba. ”
Soomaali badan ayaa ku eedeeya Fidel Castro iyo askartii 15,000 Cuba uu usoo diray inay xoojiyaan ciidamada Itoobiya intii lagu jiray Dagaalkii Ogaden 1977 islamarkaana uu yahay qofka baabbi’iyay rajada “Soomaali-weyn” ama Greater Somalia.
” Alle ha u naxariiste Madaxweyne Siyaad Barre, oo kalsooni ku qabay awoodiisa ciidamada Soomaaliya iyo inuu ka adkaanayo halganka Mengistu Haile Mariam ayaa bilaabay duulaanka lagu qabsaday Ogaden.
Dhawr guulo hore ka dib, ciidamadii qaranka Soomaaliya (SNA) ayaa qabsaday ku dhowaad 90% dhulka Ogaden. ” Ugu dambayntii, Midowga Soofiyeet ayaa lagu qasbay inay kala doortaan laba sokeeye waxayna u xishteen Itoobiya.
Soofiyeeti ayaa tababaray 50,000 oo Itoobiyaan ah, una diray qalab military iyo inta u dhaxaysa 15,000-17,000 askar oo Cuba ka socoto.
Ka dib markii uu dhintay Fidel Castro , Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa warbaahinta bulshada ku muujiyey dareen isku dhafan oo ku saabsan dhimashada.